The Recorder - Mugabe dies; liberated Zimbabwe, then held it for 37 years
Left: Zimbabwe's President Robert Mugabe officiates at a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare in 2017. AP PHOTO/Ben Curtis
FILE - In this Oct. 3, 2017 file photo, Zimbabwean President Robert Mugabe during a meeting with South African President Jacob Zuma at the Presidential Guesthouse in Pretoria, South Africa. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Themba Hadebe, FILE) Themba Hadebe
FILE - In this Tuesday, March 18, 2008 file photo, Zimbabwe President Robert Mugabe addresses party supporters at a rally in Gweru, about 250 kms. (155 miles) south of Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, file) Tsvangirayi Mukwazhi
Children play soccer next to a defaced portrait of Former Zimbabwean President Robert Mugabe in Harare, Friday, Sept, 6 2019. Robert Mugabe, the former leader of Zimbabwe forced to resign in 2017 after a 37-year rule whose early promise was eroded by economic turmoil, disputed elections and human rights violations, has died. He was 95. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) Tsvangirayi Mukwazhi
FILE - In this Wednesday, May 22, 2013 file photo Zimbabwean President Robert Mugabe, left, shakes hands with Prime Minister Morgan Tsvangirai after he signed the new constitution into law at State house in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File) Tsvangirayi Mukwazhi
FILE - In this Sunday, July, 29, 2018, file photo, Former Zimbabwean President Robert Mugabe, left, and his wife Grace pose for a photo after a press conference at their residence in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File) Tsvangirayi Mukwazhi
Top: People gather around a portrait of former Zimbabwean President Robert Mugabe in Harare, Friday. AP PHOTO/Tsvangirayi Mukwazhi
Children play next to a defaced portrait of Former Zimbabwean President Robert Mugabe in Harare, Friday, Sept, 6 2019. Robert Mugabe, the former leader of Zimbabwe forced to resign in 2017 after a 37-year rule whose early promise was eroded by economic turmoil, disputed elections and human rights violations, has died. He was 95. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) Tsvangirayi Mukwazhi
A vendor sells newspapers on the streets of Harare, Friday, Sept. 6, 2019. Robert Mugabe, the former leader of Zimbabwe forced to resign in 2017 after a 37-year rule whose early promise was eroded by economic turmoil, disputed elections and human rights violations, has died. He was 95. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) Tsvangirayi Mukwazhi
FILE - In this Saturday, Oct. 31, 2009, file photo Zimbabwe President Robert Mugabe arrives for the burial of a prominent member of his party, Misheck Chando, in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File) TSVANGIRAYI MUKWAZHI
FILE - In this Friday, Nov. 17, 2017 file photo Zimbabwe's President Robert Mugabe, center, arrives to preside over a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare, Zimbabwe. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Ben Curtis, File) Ben Curtis
FILE - In this Friday, Dec. 7, 2012 file photo Zimbabwean President Robert Mugabe clenches his fists as he delivers his speech at his party's 13th annual conference, in Gweru about 250 Kilometres south west of the capital Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File) Tsvangirayi Mukwazhi
FILE - In this Wednesday, Nov. 10, 1976 file photo, leaders of the Black National Front Joshua Nkomo, left, and Robert Mugabe make a no progress statement after their informal meeting with British chairman Ivor Richard at the Palais of Nations, Geneva, Switzerland. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Dieter Endlicher, file) Dieter Endlicher
FILE - In this Saturday, Dec, 17, 2016 file photo, Zimbabwean President Robert Mugabe addresses people at an event before the closure of his party's 16th Annual Peoples Conference in Masvingo, south of the capital Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File) Tsvangirayi Mukwazhi
FILE - In this Thursday, May 18, 1995, file photo, President Bill Clinton gestures while talking to Zimbabwe's Prime Minister Robert Mugabe in the Colonnades of the White House, Washington. Mugabe, the longtime leader of Zimbabwe who was forced to resign in 2017 after a military takeover, has died at 95. (AP Photo/Greg Gibson, file) Greg Gibson
FILE - In this April 12, 2000 file photo, Cuba's leader Fidel Castro, left, greets Zimbabwe's President Robert Mugabe at a dinner reception during the South Summit of developing nations in Havana, Cuba. (AP Photo/Victor R. Caivano, File) Victor Caivano
FILE - In this Sunday, Dec. 13, 1998 file photo, former South African president Nelson Mandela, left, walks with Zimbabwean President Robert Mugabe in Harare. Mugabe, the longtime leader of Zimbabwe who was forced to resign in 2017 after a military takeover, has died at 95. (AP Photo/Rob Cooper, File) Rob Cooper
FILE - In this Aug. 27, 1980 file photo, President Jimmy Carter meets Zimbabwe's Prime Minister Robert Mugabe in the Oval Office in Washington. Mugabe, the longtime leader of Zimbabwe who was forced to resign in 2017 after a military takeover, has died at 95. (AP Photo/Barry Thumma, file) Barry Thumma
FILE - In this Sept. 12, 1983, file photo, Secretary of State George Shultz, left, and Prime Minister of Zimbabwe, Robert G. Mugabe, walk to a car after Mugabe was greeted by Shultz on his arrival to Washington for talks. Mugabe, the longtime leader of Zimbabwe who was forced to resign in 2017 after a military takeover, has died at 95. (AP Photo/Bob Daugherty, file) BOB DAUGHERTY
A man pushes an empty cart past a portrait of former Zimbabwean President Robert Mugabe in Harare, Friday, Sept. 6, 2019. Robert Mugabe, the former leader of Zimbabwe forced to resign in 2017 after a 37-year rule whose early promise was eroded by economic turmoil, disputed elections and human rights violations, has died. He was 95. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) Tsvangirayi Mukwazhi
Published: 9/6/2019 10:40:59 PM
Modified: 9/6/2019 10:40:44 PM
Presidential spokesman George Charamba said that Mugabe was readmitted to the hospital complaining of chest pains. His personal doctor, Dr. Jonathan Matenga, was flown to Singapore and with Mugabe when he died at 4:45 a.m. Friday, Charamba said.